Sebenzisa iiNdawo zeMithi ukuchonga umthi
Izilwanyana kunye Nendalo Ukwakhiwa komthi kunye nePhysics
Imithi iza kwiimeko ezihlukeneyo kunye nobukhulu kodwa zonke zinengxenye ezifanayo zesiseko sezityalo kunye nesakhiwo. Unomqolo ophakathi obizwa ngokuba yi-trunk. I-trunk-covered covered trunk isekela isakhelo samasebe kunye namahlamvu. Esi sikhokelo sithathwa njengesithsaba. Amasebe, kwakhona, athwala ngaphandle kwengubo yamacembe.
Umthi unamathele emhlabathini usebenzisa umnatha weengcambu, ezithe zanda kwaye zikhule zikhudlwana ngokulingana nokukhula komthi ngaphezu komhlaba. Emthini ovuthiweyo, uninzi lweeseli ze-trunk, iingcambu, namasebe zifile okanye azisebenzi. Zonke ukukhula kwezicubu ezintsha zenzeka ngamaphuzu ambalwa emthini, ngokwahlula iiseli ezizodwa. Ezi ndawo zikhulayo zifumaneka kwiingcebiso zamasebe kunye neengcambu kunye nendawo engqinileyo ngaphakathi kwegxolo. Ekugqibeleni, imithi inesakhiwo sokuzala; okanye iintyatyambo okanye iiboni.
Yonke le ngcaciso inokukunceda ukuba ufumane amagosa abalulekileyo ukuchonga umthi . Amaqabunga, amaqabunga, amahlamvu kunye neziqhamo angenza umsebenzi okhawulezayo wokubonakaliswa komthi. Ubumba, nangona kungengomthi "inxalenye", idlala indima ephambili kwimimandla yendalo.
Sebenzisa umdwebo we-Leaf ukuchonga umthi
Iifom zeLeaf. Uhlobo lwe-clip le-USFS-TAMU
Amaqabunga amafektri okutya emthini. Ixhaswe lilanga, i-green substance kwiqabunga, ebizwa ngokuthi i-chlorophyll, isebenzisa i-carbon dioxide kunye namanzi ukuvelisa i-carbohydrates egcina ubomi. Inkqubo yonke ibizwa ngokuba yi- photosynthesis . Iifama nazo zijongene nokuphefumla kunye nokuphefumula.
Iqabunga lomthi lingummakishi oyintloko oncedisayo ekugqibeleni kunye nokuchonga naziphi na iintlobo zemithi. Ininzi imithi ingabonwa yiqabunga yodwa.
Njengoko unokubona kumzekeliso, amaqabunga afika kwiimpawu ezininzi kunye nobukhulu. I-"inkwenkwezi" ifom ye-sweetgum ihluke ngokupheleleyo kwiqabunga elinjengeentliziyo zempuphu ebomvu . Qaphela ukuba amaqabunga angachazwa ngokugcina isiseko sabo, imida yabo emithanjeni yabo kunye nesicu sabo okanye i-tip. Isiqalo ngasinye sinalo igama kwaye sisetyenziswe inxalenye yenkqubo yokuchonga.
Amaqabunga ahlanganisiweyo. Uhlobo lwe-clip le-USFS-TAMU
Iqabunga lingaba lula (akukho namaphecana alongezelelweyo) okanye iqela (iifatshana ezintathu okanye ngaphezulu). Esi sakhiwo seqabunga sisoloko sincediswa ngokuchongwa komthi ngenxa yesityalo ngasinye sakhiwo seqabunga.
Kwiqabunga elincinane, iqabunga leqabunga lixhomekeke kwisihlunu okanye ihlumela. Kwiqabunga eliqingqiweyo, zonke iifrikhthi zinamathele kwisigxina esisodwa okanye i-rachis.
Amagqabi anamaqebunga angadideka ngenxa yobuninzi beendlela zokwakheka kwamagqabi. Iintlukwano ezinkulu zingamaqabunga esundu, amaqabunga okanye i-lobes ekhula ukusuka kwiphepha lembali ngendlela yesandla. Amagqabi angama-pinnate akhula amaphephancwadi kumacala athile asemacaleni.
Kukho amaqabunga anamaqabunga aphindwe kabini okanye amaqabunga aphindwe kabini.
Sebenzisa i-Flower, IsiCone kunye neZithelo ukuchonga umthi
Ihlathi kunye Nezithelo Imithi kunye Nezityalo, umzekeliso we-Botanical Victorian. bauhaus1000 / Getty Izithombe
Ngaphandle kwamasebe awo, iingcambu, kunye namaqabunga, umthi ovuthiweyo ukhula esinye isakhiwo esibalulekileyo - intyatyambo (okanye i-cone, kwimeko yezinto eziqhelekileyo). Ezi zizakhi zokuzala ezivela kuyo imbewu.
Le mibhobho yembewu, iibhondi, iintyatyambo, kunye neziqhamo ziimpawu eziphambili ekuncedeni ukukhangela kunye nokuchonga iintlobo ezithile zemithi. Asinokuthenjwa njengeqabunga, isiqhamo okanye imbewu yepod inokufumaneka kuphela kwixesha elithile lonyaka. Amagqabi ngokubanzi axhoma kumthi okanye emhlabathini phantsi komthi.
Izakhiwo zokuzala ziyimithombo ephezulu yokuchongwa komthi. Ingqungquthela ye-oki yintsimi kodwa ihluke ngokupheleleyo kwi-samara yemephu. Fundisisa umzekeliso ukuba uzifundele ezininzi kwiimbewu ezikhoyo kunye nezakhiwo zefruiting kwimithi.
Sebenzisa i-Twig Ukuchonga Umthi
IiMigodi. Uhlobo lwe-clip le-USFS-TAMU
Yikholwa okanye akunjalo, amaqonga angasetyenziselwa ukuchonga umthi. Le nto yinto entle ngenxa yokuba yonke into ehleliyo yomthi ngexesha leenyanga ezidlulileyo zebusika. Amagqabi kunye namaqabunga aqhelekanga asetshenziselwa ukuzisiza umthi ngexesha lokusasa kwentwasahlobo ngasekuqaleni kwehlobo.
Amagqabi anemizimba ebizwa ngokuba yimifuno, amaqabunga amaqabunga, kunye nezikhonkwane ezinokuthi zihluke kwiintlobo ezahlukeneyo. Amatye kunye neentsiba zinokuthi zenzeke kumahlumela kwaye zikhetheke kwimithi ethile. I- pith i-twith ingaba "namagumbi" athile kunye / okanye ibe nesimo esithile. Amagqabha amanqaku amaninzi ukuba uyazi ukuba ukhangele ntoni.
Ezinye izakhiwo ezisetyenziselwa ukuchongwa kwemithi zibeka izikhonkwane, i-bud scale, kunye neziqhamo zeziqhamo, izihluma kunye neenalticels. Fumana iqhosha elincinane lesitshixo kwiziphumo ezilungileyo. Isebe le-Dendrology yaseVirginia Tech libonelela ngomthombo omkhulu womthi kwi-intanethi.
Icandelo lomthi, Sebenzisa iBark ukuze Uchonge uMthi
Ukuvalela kweempawu ezahlukileyo zomthi womthi kunye negxolo. I-DEA IMITHETHO YETAYIBHILE / i-Getty Izithombe
I-bark yintonga yemvelo yokhuseleko kwaye ikhusela kwiisongelo zangaphandle. I-Bark nayo inemisebenzi emininzi yemisebenzi; omnye ulahla umthi wezinto ezinqabileyo ngokuwuncenga nokuwavala kwiiseli zawo ezifileyo kunye nama-resins . Kwakhona, i-phloem ye-bark ithwala ubuninzi bezondlo kwiimithi.
I-Xylem ithwala amanzi kunye neemaminerali kwiingcambu ukuya kumaqabunga. I-Phloem ithwala ukutya okwenziwe (ushukela) ukusuka kumacembe ukuya kwiingcambu. I-cambium (uluhlu lwamanzi kuphela iiseli ezimbalwa ezinqamlekileyo) luluhlu lokuvelisa, olwenzela i-xylem kunye ne-phloem.
Ngokutsho kukaHugues Vaucher, umbhali we- Tree Bark - Umqondiso weMbala , "Kuya kuthatha imifanekiso eyizigidi ukugubungela iindidi ezahlukahlukeneyo ezifunyenwe kumthi." Ngenhlanhla, iingubo zogqabileyo zifana nezihlobo zemithi kwaye zenza uphawu olubonakalayo olubonakalayo lwemithi ebanzi. Iimpawu zentsimbi zihlukaniswe zibe zii-18 iintlobo, ukusuka kwi-smooth (beech) kuya kwi-spiny (inkumbi).
Andiyifumananga isitshixo samagxolo kwaye ucinga ukuba omnye uya kuba nzima kakhulu ukudala. Izahlulo ezibanzi kuphela ziyakunikwa ukusetyenziswa kwegxolo kuphela. Ungakwazi ukwahlukanisa ngokulula phakathi kwe-oki kunye nephayini ngokujonga i-bark. Icandelo elinzima lihlukanisa iintlobo ezahlukeneyo ze-oki okanye i-pine yi-bark yedwa.
Icandelo lomthi, Sebenzisa udidi okanye iSilhouette ukuchonga isihlahla
Uhlobo lwe-clip le-USFS-TAMU
Nangona kungengowomsebenzi inxalenye yomthi, ukuma kusekhona into ebonakalayo yomthi kunye nendlela enye yokunceda ekuhleni kwayo.
Umzululwazi uRoger Tory Peterson uthi ngokungafani nento ecacileyo yeentaka, umthi awuhambelani ngendlela okanye isimo. "Oqalayo, ukufunda imithi yakhe, ulangazelela incwadi eya kumnika imilo kunye namanqaku ensimi apho angenza khona ukucaciswa kwe-snap. Kodwa akuyona into elula ... ngaphakathi kwemida, umntu unokukwazi ukukwenza, uqaphele ngesimo kunye indlela yokukhula imithi embalwa ".
I- poplar ephuzi iya kuhlala ibonakala ngathi i-poplar ephuzi ngokubanzi. Nangona kunjalo, umthi omncinane ungabonakala uhluke ngokupheleleyo kumthi womzali. Umthi okhulile wehlathi unokukhula ube mde kwaye unqabile xa umzala wakhe okhulile entsimini ekhula isithsaba esiphezulu kwelanga.
Isatidwe sesimo esingentla sichaza ngokubanzi iConic njengemifanekiso ye-B ne-E; Ngokubanzi Columnar njenge-A, C, no-F; Ikhonkco edibeneyo njengoD, G kunye nami; Uluhlu olugqithisileyo njengo-F no-K; Ukusabalalisa ngokubanzi njengoH, J kunye noL. Ngaloo milo yomthi, ngokusobala ufuna ulwazi oluthe vetshe ukuchonga le mithi ngeentlobo.
Izazisi Umthi usebenzisa i-Leaf Shape, Marginal and Venation
Izifo Ezibulalayo Izihlahla
Izifo eziMngcipheko zezifo - Ukuchonga nokuLawula
Izifo zezihlahla zeLeaf Spot: Ukukhusela nokuLawula
Ukuqala kweMithi yokuThoma
I-Seiridium Canker kwiLeyland Cypress
Ukuxilonga nokuLawula Inhliziyo iVukele kwiMithi
Kutheni i-Maple yaseJapane ebomvu ngoku ihluma amagatsha ahlaza?
Ukuchonga nokuLawula i-Powdery Mildew kwiMithi
I-Easter Homily yaseSt. John Chrysostom
Yintoni Ixesha Elizayo Lebhokisi Elijongene Nalo
Ukukhanya Okumnyama Kuveza I-Star Neutron
Indlela Yokubhala Inqaku Elilandisayo okanye Intetho
Ngo-1967-U-Betty Andreasson Ukuthinjelwa
Izinto Ezininzi Ongazi Ngayo Iqonga lika-Chris Young
U-Andante uxelela uMculi ukuba ahambe noMculo wakho
Seemiller Grip kwiTable Tennis okanye ePing-Pong
Iingcebiso zokwenza iipilisi ezimnandi Yeka ukutsha
Umthetho wokudibanisa iiVolumu Inkcazo
Abemi baseLos Angeles
I-Top 10 ezidlulileyo ze-US Tornadoes
Umongameli waseMelika unokuhlala ixesha elide e-Ofisi?